Xubno ka Mid ah Kooxda Jwxo-shiil, oo Jooga Belgium – Rasaasa News
Xubno ka Mid ah Kooxda Jwxo-shiil, oo Jooga Belgium
Dec 9, 2010 Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, oo Jooga Belgium, peace, Somali, Xubno ka Mid ah Kooxda Jwxo-shiil
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya, in xubno ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, ay haatan joogaan dalka Belgium. Waxay wararku sheegayaan in sababta ay halkaasi u joogaan ay tahay iyaga oo kulan qarsoodi ah la leh Safiirka dawlada Itobiya u jooga dalka Belgium.
Wadahadalkan ayaa la sheegayaa in uu hordhac u yahay shir afar geesood ah oo la filayo in uu ka dhici doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya bilowga sanadka cusub. Shirkan oo ay qaban doonto Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee degan dalka Kenya, ayaa lagu marti qaaday masuuliyiin ka socota dawlada Itobiya, masuuliyiin ka tirsan Jwxo iyo xubno ka tirsan Kooxda Jwxo-shiil.
Hadaba, sida ay wararku sheegayaan afarta dhinacba way isla qaateen kulanka, waxaana la doonayaa in si dhab ah loogu wada xaajoodo arimaha nabad galiyada ee degaanka Somali Ogadeeniya iyo maxay dantu ugu jirtaa dadka.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxaa saaraan cadaadis xoog leh oo kaga imanaya guud ahaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya, gaar ahaana beesha Jwxo-shiil, oo iyadu eedaysan. Kooxda Jwxo-shiil, ayey tabar iyo taloba ka dhamaatay, si xoog lehna ay ummada Somalida Ogadeeniya uga hor timid.
Jwxo-shiil, ayey beeshiisu si gaar ah ugula kulmeen Dubai, bisha November dhexdeedi, xili uu ka yimid Eritrea. Waxay beeshu kula xaajootay in uu magac ka tago waxba ma uu hayee, oo ay macnaheedu tahay nabad ha laguu raadiyo, intii aad waxba la,aan ku dhaan lahayd.
Jwxo-shiil, waxaa uu aqbalay in uu nabad qaato, waxaase dawlada Itobiya la isku mari la,a yahay hal qodob oo ah in uu heshiis la saxiixdo dawlada dhexe. Dawladu waxay aaminsan tahay in ONLF, ay heshiis la gashay, oo ayna jirin ONLF dambe oo heshiis lala galo, waxayse ogoshahay in Jwxo-shiil, amaan la siiyo uuna ku biiro ururka nabada qaatay ee ONLF.
Dhinaca kale, waxaa Addis Ababa dodobaadkan joogay laba masuul oo ka tirsan dawlada Kenya [somali-kenya], in kasta oo aan dhab loo ogayn sababta ay Addis Ababa u tageen, waxay warar hoose sheegayaan in ay dawlada Itobiya kala hadlayaan in wajiga loo qurxiyo Jwxo-shiil. Lama oga waxa ay masuuliyiintu kala kulmeen, arinta ay maleegayaan.
Xubnaha Jwxo-shiil, ee haatan jooga Belgium, ayaan la ogayn in ay yihiin xubno cadhaysan oo iskood isu abaabulay iyo in ay kooxdu wada socoto. Waxayse arintu u egtahay in wax la isku af gartay wajigana kooxda Jwxo-shiil loo suubinayo, oo ay mari doonaan wadadiid nabada ee ay hore u mareen UWSLF iyo ONLF.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa nafisay gude iyo dibadba tan iyo intii la saxiixay heshiisyada nabada ee u dhaxeeyey ururada UWSLF, ONLF iyo dawlada.
Kooxda Jiraban ee Jwxo-shiil, oo Caasmara Lagu Canaantay
Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Denmark, oo Martiqaad ka Heshay Dawlad Degaanka Somalida